श्रीमानले छो’डेपछि रोडमा यस्तो अवस्थामा भे;टीईन यि बृद्धा आमा,रुंदै भन्छिन् ”बुढे सकालमा छोराछोरीले नि हेरेनन्” (भिडियो सहित) – Ap Nepal
काठमाडौ । जब मानिसलाई पिडा पर्छ तब मात्र थाहा हुन्छ सुख, पिडा र रोदनको असली कुरा र यस्को दर्दनाक अवस्था पनि । हो आज हामी यस्तै आफनै श्रीमानबाट बुढेसकालमा पनि यसरी पिडित भएर सडक पेटीमा भौतारिदै हिडेकी एउटी बूढी आमाको बारेमा कुरा गर्दैछौ ।
यि आमाको घर गोर्खा हो नाम बिबा खनाल जो अहिले ५० बर्ष भन्दा बढी भईन तर यिनको पि:डा भने उस्तै छ । सानैबाट पि;डापि;डैमा हुर्केकी यिनी पिडा लुकाउन रातभरि रुने गर्छिन ।
आफन्त र इष्टमित्रले पनि हेरेनन नत आफनै सनतानले । भन्छन नि बुढेसकालमा के के सहनपर्छ के के देख्नपर्छ त्यो साचो भएको छ यि आमाको जिन्दगीमा । पिडा भुलाउन बेला बेलामा गित गाएरै आफै भित्र रमाउने गर्छिन । गित लेख्छिन, आफैभित्र खुशी हुन्छिन तैपनि पि:डाले कहिले साथ छोडदैन ।
यि आमाका छोरीहरु पनि धेरै छन, धेरैचोटि छोरीको घरमा गएर पनि बसिन तर सासु ससुराले के भन्लान ? र छिमेकीले के सोच्लान ? भनेर अहिले भागेर काठमाडौ आएकी छिन । रुदै हार गुहार गर्छिन मलाई सहयोग गर भन्छिन तर कसैले सुन्दैनन,
हेरौ यि सडकमा भौतारिएको आमाको दर्दनाक ब्यथा —
Prev‘छोरीको बधाईको फोनले तीनदिनसम्म घाँस का:ट्न जान पनि पा’ईन’- सपना रोका मगरका बाबा आमा भन्नुहुन्छ (भिडियो सहित)
Nextआजको राशिफलः बि.स.२०७७ साल मंसिर २० गते शनिबार इश्वी सन २०२० डिसेम्बर ५ तारीख
राहुल-स्मिता पुन,र्मिलनबारे ‘समाजका क:लंकहरुको नाश होस्’ भन्दै महावीर पुनले यस्तो लेखे (स्टा;टस सहित)
विष्णु माझीको जस्तै आवाज भएकी अश्मिताले गाउछिन् यति मिठो भन्छिन् म अपाँग भयर गाउने अवसर पाईन (भिडियो सहित)
१ वर्षसँगै बस्दा धेरै पल्ट बच्चा फाʼ ल्न लगायो । यति धेरै राम्री आशाको यति ठुलो पिडा रुदै मिडियामा (भिडियो सहित)